လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသည့် အစီရင်ခံစာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများ စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တရားစွဲပိုင်ခွင့်မရှိစေရဟု ဖော်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၇ နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီက မေးမြန်းမည် – Eleven Media Group - Open Hluttaw
လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသည့် အစီရင်ခံစာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများ စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တရားစွဲပိုင်ခွင့်မရှိစေရဟု ဖော်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၇ နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီက မေးမြန်းမည် – Eleven Media Group
Posted on အောက်တိုဘာ 18, 2018 မတ် 1, 2019 by zinmyohtetaung
လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသည့် အစီရင်ခံစာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး တရားစွဲပိုင်ခွင့်မရှိစေရဟု ဖော်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၇ နှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီက မေးမြန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူး…
Source: လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသည့် အစီရင်ခံစာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများ စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တရားစွဲပိုင်ခွင့်မရှိစေရဟု ဖော်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၇ နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးသို့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီက မေးမြန်းမည် – Eleven Media Group
This entry was posted in အထွေထွေ, လွှတ်တော်သတင်းများ, တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော်. Bookmark the permalink.
← ခြံစည်းရိုးကြက်ဆူပင် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးမည့်စီမံကိန်း ပဲခူးတိုင်း လွှတ်တော်အမတ်များကန့်ကွက် | DVB
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ယုဇနအိမ်ရာတိုက်များ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကြံ့ခိုင်မှု အလွန်ဆိုးရွားနေဟုဆို | The Myanmar Times →